Iberia Nhaka Croquettes | Kudya kweNutri
NutriDiet | | Mapepa ane hutano
Croquettes inogara iri imwe yeaya maappizizer iwe ausingakwanise kupotsa. Nekuti ivo vanogara vakunda uye vazhinji voruzhinji vanozvida. Ivo vanobvuma mhando dzese dzezvigadzirwa asi nhasi, isu tinobheja pane iyo Nhaka yeIberia muchimiro chemhando yepamusoro ham. Izvo zvinowedzera akawanda mabhenefiti ekufunga.
Saka kana tikaisa pamwechete ham nemakwati, Tichava nemubatanidzwa unopfuura wekuputika patafura yedu. Nekuti whim yakaita seiyi tinogona kuzvipa isu pachedu. Iwe unoda kubudirira pamberi pevaeni vako? Ipapo usazeze kutevedzera nhanho dzatinokuratidza pano.
1 Izvo zvinongedzo zveIberian legacy croquettes kuvanhu vana
3 Mabhenefiti eIberian nhaka ham
Izvo zvinongedzo zveIberian legacy croquettes kuvanhu vana
50 gramu emafuta emuorivhi (kunyangwe iwe uchikwanisa kushandisa bota kana uchiida nenzira iyoyo)
75 gramu yeupfu
250 magiramu eIberian ham
Chingwa chechingwa neupfu kupfeka makoroketi
ari Hamu croquette vane gadziriro yakapusa. Kutanga, tinoisa pani pamoto nemafuta kana bota zvichienderana nezvawasarudza. Iwe unofanirwa kupisa mafuta zvishoma kana kumirira kusvikira bhotoro ranyungudika zvachose. Panguva ino, iwe unozowedzera hanyanisi iyo yaunofanirwa kucheka zvakanyatsonaka. Tiri kuenda kuti tiise poach iyo, saka isu tichafanirwa kuimutsa kwemaminetsi mashoma.
Kana hanyanisi yawana iko kujeka, inguva yekuwedzera iyo Iberian Hamu, yatinenge tachekacheka kuita zvidimbu zvidiki. Kana iwe uchida chimwe chigadzirwa chakafanana, iwe unofanirwa kuziva kuti iyo Nhaka yeIberia mudare reChirungu ine yakasarudzika dzakasiyana uye zvinwiwa zvaunofanirwa kunhuhwirira. Asi pamwe yemberi mabikirwo uye mamenu. Zvichakadaro, isu tichava nezvose hanyanisi pamwe nenyama mupani umo matinozowedzera hupfu uye regai zvibike kwemaminitsi matanhatu. Chatinoda ndechekuti furawa irasikirwe nekunaka, asi inowedzera kuenderana nemhedzisiro.
Mushure memaminetsi iwayo, inguva yekuwedzera mukaka uye kumutsa nguva dzose. Isu tichaona kuti inosimuka sei uye isu tichawedzera zvishoma. Kana uchimutsa mushe, tichadzivirira mapundu kubva kuumbika. Kana tava nehupfu husina kunyanya kunamira asi husina kusununguka zvachose, inguva yekuravira munyu, kuwedzera nutmeg, kumhanyisa zvakare uye kudzima kupisa. Isu tinodurura mukanyiwa mune tsime-rakapararira sosi uye rega itonhorere. Kana kuchitonhora, tichaenda nayo kufiriji.
Unogona kuvasiya kwemaawa akati wandei kana, ita gadziriro iyi usiku uye mirira kusvikira zuva rinotevera. Kupedzisa ndiro, isu tichafanirwa kutora zvikamu zvehupfu uye tigoita bhora navo kana, kuvapa chimiro chakareba, maererano nezvaunoda. Paunenge uinazvo, unozvipfuudza kuburikidza neupfu, yakarohwa zai uye chingwa chechingwa. Uri kuvaisa mupani nemafuta anopisa uye ivo vanozokangwa mumabhata madiki, kuti mhedzisiro yacho ive yakanaka. Iye zvino unogona kunakirwa yakasarudzika flavour!
Mabhenefiti eIberian nhaka ham
El Iberia nhaka Hipercor une sarudzo yekuedza zvimwe zvigadzirwa zvine mhando yepamusoro. Asi nhasi tinotarisa pane ham, chinova chinhu chakakosha muhupenyu hwedu. Mune ino kesi, yakawedzerwa kune imwe yeidzi ndiro kana tapas par kugona, ivo vanogadzirisazve chimwe chezvakanakisa zvinonaka. Asi ndeapi mabhenefiti ayo makuru?
Zvinofanira kutaurwa kuti mafuta enguruve yeIberia ane oleic acid yakawanda kupfuura mamwe. Izvi zvinoita kuti mhedzisiro yeham yako iwedzere inobatsira mu cholesterol. Kuita, saka, kuti zvakanaka kusimuka. Inoshandiswa kashoma pavhiki kana kunyangwe katatu uye muhuwandu hushoma, mupiro unobatsira chose kuhutano hwedu. Uye zvakare, ine mapuroteni uye pasina kukanganwa mavhitaminzi B1, B6, B12 uye E. Zvicherwa zviripowo muIberia nhaka kubva kwatino simbisa zvese simbi nendarira kana calcium nezinc. Iwe uchiri kushamisika kuti uchazvisuma kune rako rekudya here kana kwete?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Nutrition » Mapepa ane hutano » Iberian nhaka macroquettes
Deredza uremu nekudya mupunga wehuku